Izindaba - IGenerac yethula iswishi yokudlulisa yokuqala ezenzakalelayo nomsebenzi wokuhlanganisa amandla wasekhaya ohlanganisiwe
I-Waukesha, Wisconsin, Mashi 27, 2020 / PRNewswire / - Ukuphela kukagesi kusuka e-East Coast kuya e-West Coast sekuholele ekutheni sikhule kakhulu isidingo sama-generator asiza amakhaya. Ngokwanda kwemali ekhokhelwa ugesi1, uhlelo olusha lokuqapha amandla kagesi lweGeneracⓇ Power Systems (NYSE) i-PWRview ™ automatic switch switch (ATS) ixazulula inselelo yokuvikela amakhaya ekuphelelweni kukagesi ngenkathi ivikela ama-akhawunti asebhange kuzikweletu eziphezulu zikagesi. : GNRC).
Ngokwethulwa kwe-PWRview ATS, uGenerac uhambe phambili ekuhlinzekeni i-Home Energy Monitoring System (HEMS) ekushintsheni. I-PWRview ATS ivumela noma yiliphi ikhaya elifakwe i-generator eyisipele ekhaya ukufinyelela ngokushesha ukuqonda okunamandla futhi okungabizi kakhulu ngokusetshenziswa kwamandla kwekhaya.
Njengoba i-PWRview monitor yakhelwe kuswishi yokudlulisa edingwa yi-generator, uma nje uhlelo lwe-generator selufakiwe, ukuqonda kwe-PWRview kungatholwa. Abanini bemizi bangalanda uhlelo lokusebenza lwe-PWRview kunoma iyiphi i-smartphone ukubheka kalula ukusetshenziswa kwamandla abo kusuka noma yikuphi emhlabeni futhi bavule imininingwane engakaze ibonwe engasiza ukwehlisa izikweletu zamandla kuze kufike ku-20% 2.
Uhlelo lokusebenza lwe-PWRview luvumela abaninikhaya ukuthi bafinyelele ukusetshenziswa kwabo kwamandla ngokusebenzisa isibonisi sangempela kanye nokufinyelela okukude kwe-24/7 ekusebenziseni kwabo ugesi. Amadeshibhodi wesikhathi sangempela ahlinzeka ngemininingwane ejulile yokwazisa abaninikhaya uma bechitha amandla nalapho amandla abo esetshenziswa khona. Ukubikezela okuningiliziwe kokulandela umthethosivivinywa nokusetshenziswa kwawo kungafundisa abaninikhaya ngemikhuba yamandla ukuqeda isimanga kwizikweletu zabo zanyanga zonke.
“Iswishi yePWRview yenza kube lula ukonga amandla nemali,” kusho uRuss Minick, oyiChief Marketing Officer yakwaGenerac. "Ukwenza i-HEMS ihlanganyele ekushintsheni kokushintshwa kusho ukuthi abanikazi bama-generator bangonga imali eyanele ngokusebenzisa amandla kagesi asebenza kangcono ukukhokha izindleko eziningi zezinhlelo zokulondoloza amakhaya, bejabulela konke ukuphepha kwezixazululo zamandla okwenza isipele Nesiqinisekiso."
Ukuvikela amakhaya namakhaya ekucinyweni kukagesi nokwethula ukonga ugesi okusha ngama-generator asiza amakhaya akwaGenerac nge-PWRview, sicela uvakashele ku-www.generac.com ukuthola eminye imininingwane
1 Umthombo: I-EIA (US Energy Information Administration) 2 imiphumela yokonga amandla iyahluka ngokuya ngemikhuba yamandla, usayizi wendlu, kanye nenani labagibeli.
Mayelana neGenerac Generac Power Systems, Inc. (NYSE: GNRC) ingumhlinzeki ohamba phambili womhlaba wonke wemikhiqizo eyisipele kanye namandla amakhulu, amasistimu, amathuluzi wokushayela izinjini kanye nezinhlelo zokugcina ilanga. Ngo-1959, abasunguli bethu bazinikezela ekwakheni, ekwenzeni ubunjiniyela nasekukhiqizeni i-generator yokuqala engabizi kakhulu. Eminyakeni engaphezu kwengama-60 kamuva, ukuzibophezela okufanayo ekusungulweni kwezinto ezintsha, ekuqineni nasekusebenzeni kahle kwenza inkampani ikwazi ukwandisa iphothifoliyo yayo ehola phambili embonini emakhaya nasemabhizinisini amancane, ezindaweni zokwakha, nasezinsizeni zezimboni nezamaselula emhlabeni jikelele. IGenerac inikela ngesipele senjini eyodwa kanye nezinhlelo zamandla ezinkulu ezifika ku-2 MW nezisombululo ezihambisanayo kuze kufike ku-100 MW, futhi isebenzisa imithombo eyahlukene kawoyela ukweseka izidingo zamakhasimende ethu kagesi. AbakwaGenerac babamba iPower Outage Central, umthombo onegunya wokucinywa kwamandla kagesi e-United States kuGenerac.com/poweroutagecentral. Ngeminye imininingwane mayelana neGenerac nemikhiqizo nezinsizakalo zayo, sicela uvakashele iGenerac.com.